कार्तिक २६, २०७६ मनु बिद्राेही
'सन्नाटाको लय'बाट चर्चित बनेका कवि नरेन्द्र कुमार नगरकोटी एक कुशल सम्पादक हुन् । जिम्मेवार प्रकाशक पनि हुन् । कविता लेखेर साहित्यमा प्रवेश गरेका नगरकोटीले यात्रा ,अनुभव, अग्रज र समकालीन साथीहरुको सङ्गत नै साहित्यमा लाग्नुको प्रेरणाको स्रोत मान्छ्न् ।
नगरकोटीको मुख बिधा कविता भए पनि उनी गीत ,गजल ,शैक्षिक निबन्ध, संस्मरणात्मक लेख र थुप्रै बालसाहित्य पनि लेखेका छन् ।
शाब्दिक बुक्स, पाइला फाउण्डेसन नेपाल र बाल उदयमा आवद्ध उनको कविता सङ्ग्रह "सन्नाटाको लय "(२०७६)प्रकाशित भैसकेको छ । बालसाहित्य र शैक्षिक साहित्यका पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा रहेका नगरकोटीसंग सारङ्गीकर्मी मनु बिद्रोहीले गरेको सारङ्गी सम्बाद ।
म व्यस्त छु भनौं भने फुर्सदमै हुन्छु प्रायः । के काम गरिरहेको छु ? भनेर आफैंलाई प्रश्न पनि गर्ने गरेको छु । फुर्सदमा छु भनौं भने चाहिँ काम गरि नै रहेको हुन्छु भन्ने मेरो ठम्याइ छ । मेरा औंलाहरु कम्प्युटरको किबोर्डमा नाचिरहेका हुन्छन् । आफु भने अक्षरहरुमा अनुवाद भइरहेको पाउँछु ।
यसरी विताइरहेको छु दिन । मेरो सोलो कविता सङ्ग्रह ’सन्नाटाको लय‘ प्रकाशन भएको दुई महिना हुँदैछ । कविताको बाटो हुँदै कवितापारखीसम्म पुगेर उहाँहरुसँग संवाद गरिरहेको छु । ’बाल उदय‘ मासिक बालपत्रिकाको काममा साथीहरुसँगै हरपल खटिरहेको छु । स्कुलहरुमा कार्यशाला सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । शिक्षकसँग, अभिभावकसँग र बालबालिकासँग काम गर्छु ।
२. तपाईंको विचारमा साहित्य के हो? साहित्य सिर्जना के को निम्ति गर्नुहुन्छ?
साहित्य के हो भन्ने प्रश्न मलाई नसोधियोस् जस्तो लाग्छ जहिले पनि । अब प्रश्न सोधिसकिएपछि भन्नैपर्दा, एउटा कलात्मक अभिव्यक्ति साहित्य हुनसक्छ ।
मेरो निजी विचारको कुरा हो, साहित्य कुराकानी गरेजस्तो होइन । भाव, विचार र कलाको संयोजन भएको सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति नै साहित्य हो । साहित्य जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जीवनका लागि रचिएको एउटा शाब्दिक जीवन हो । म आफ्नै आनन्दका लागि लेख्छु । एउटा लेखनको चरणमा म तनावग्रस्त हुन पनि सक्छु तर लेखिसकिएपछिको चरम आनन्दले मलाई मोहित पार्छ र त म लेख्छु । आफु अभिव्यक्त हुन पाउनु जीवनको एउटा अमूल्य प्राप्ति हो ।
म त्यो कवितामा पाउँछु । अन्य लेखनबाट पनि पाउँछु । लेखिसकिएपछिको सिर्जना पाठकको आफ्नै अनुभूतिसँग साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने म चाहन्छु । त्यसो हुन सक्यो भने बाँकी काम मेरा सिर्जनाले स्वयम् गर्नेछन् र मैले किन लेखेछु भन्ने प्रश्नको उत्तर बोध गराउँनेछन् भन्नेमा विश्वस्त छु ।
३. अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थिति बारे कतिको सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
साहित्यमा समयचेत हुन्छ । त्यसो हुँदा पहिलेको र अहिलेको भनेर तुलना नगरौं होला । तुलनात्मक अध्ययन गर्ने नै हो भने पनि केका आधारमा हेर्ने भन्ने हुन्छ होला । नेपाली साहित्यको यात्रामा छु, सकारात्मक भएरै लागेको हुँ । वर्तमान समयको युवापुस्ताका सर्जकहरु पनि बलियो उपस्थिति जनाउँदै साहित्यकर्म गरिरहेका छन् ।
विश्वसाहित्यमा नेपाली साहित्यको बजार निर्माण गर्ने सवालमा प्रयत्नहरु भइरहेका छन् । जे कुराको पनि कमजोरी हटाएर हेर्नुपर्छ र कमजोरी घटाउन लागिपर्नुपर्छ । नेपाली साहित्यमा लाग्नेहरुले यसलाई मनन गर्नु जरुरी छ भन्ठान्छु ।
४. हाल विकास भएको सुचना प्रविधि र यसले नेपाली साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ?
सुचना प्रविधिको विकास अपरिहार्य छ । यसले हरेक विकासमा टेवा पु¥याउने नै हो । नेपाली साहित्यलाई विस्तार गर्न, प्रसार गर्न र पाठकसम्म छिटो सम्प्रेषण गर्न यसको उपयोग भइआएको पाउँछु । साहित्यिक गतिविधिको तयारी र प्रचारका लागि पनि सजिलो भएको छ ।
पुस्तकको बजारीकरण गर्न पनि सुचना प्रविधिको उपयोगले सहज बनाइदिएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि नेपाली साहित्यको पुस्तक सहजै खरीद गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । यो सुखद् कुरा हो । तातै खाउँ जल्दी मरु जस्तो गरेर लेख्दालेख्दै सम्प्रेषण गर्ने परिपाटी पनि देखिन्छ । यसले नेपाली साहित्यलाई बिगार नै त गर्दैन तर त्यसो नगरे राम्रो हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ ।
५. पुरुष भन्दा महिला लेखन कम्जोर छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
माफ गर्नुहोला, लेखकको जेन्डर निर्धारण गरेर हेर्न म उचित ठान्दिनँ । जुनसुकै लिङ्ग, वर्ग, समुदायका भए पनि ऊ लेखक नै हो । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा कम या बढी भए भन्नुभन्दा पनि राम्रो लेखनका लागि ध्यान दिनु जरुरी ठान्दछु । नेपाली साहित्यमा महिला लेखकको नाम पनि उल्लेख्य छन् नि ।
आज पनि हस्तक्षेपकारी लेखनकर्म गरिरहनुभएका लेखकहरु हुनुहुन्छ । महिला लेखकहरु पछाडि परेको भन्ने कुरामा म सहमत छैन किनकि महिलाहरु नेतृत्वमा आउन पनि त समय लागेकै हो । कतै कहीँ विभेद गरिएकै छैन त म भन्दिनँ ।
महिलाहरु पछाडि परेका÷पारिएका त छन् तर महिला भएका कारण नै लेखक पछाडि परेका छैनन् । मलाई त्यस्तो लाग्छ । स्कुलहरुमा काम गर्दा छोराभन्दा छोरीको सहभागिता नै साहित्य लेखनमा अधिक भेट्छु । तर पछि, समाजले कता धकेलिदिन्छ वा परिस्थितिले कता लखेटिदिन्छ, उनीहरु लेखनमा आएको विरलै पाउँछु । हाम्रो सामाजिक संरचनाको यो एउटा बिडम्बना चाहिँ समस्या हो ।
६. धेरैलाई मिडियाले साहित्यकार बनाइदिएको हो भन्छन् नातावाद र कृपावादको प्रभावले साहित्यलाई कस्तो असर पर्ला ?
यो आंशिक सत्य हो । र अल्पकालीन पनि । मिडियाले बोकेर साहित्यकार हुने भए, मिडियाका मालिक नै विश्वप्रख्यात स्रष्टा हुने थिए । साहित्यमा मिडियाकर्मीकै हालमुहाली हुने थियो । त्यस्तो त छैन, हुन पनि सक्दैन ।
मिडियाले साहित्यलाई साथ दिनुपर्छ । साहित्यको विकासमा यसले टेवा पु¥याउन सक्छ । मिडियाले चाहेमा जो कोहीलाई सेलिब्रिटी बनाउन त सक्छ तर बचाइराख्न भने सक्दैन । नाता र कृपाले मिडियामा उचालिँदैमा कोही पनि अजरअमर र प्रभावशाली स्रष्टा बन्न सक्नेमा म विश्वस्त छैन । पाठकको अदालतले नै हो साहित्यको गुण अनुसार चरित्र र आयुको निर्णय गर्ने ।
७. साहित्यलाई समाजको ऐना मानिन्छ, कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा जोड दिने हो भने समाज परिवर्तनको लागि सहयोग पुग्ला ?
समाजको अनुहार साहित्यमा आउन सक्छ तर ऐनाले जस्तै दुरुस्तै चाहिँ देखाउँदैन । केही सङ्केत, बिम्ब र चरित्र उतार्छ । मानवीय मनमा स्पर्श गरेर अनूभुतिको तहमा मानिसलाई पु¥याउँछ । मनको उपचार गर्नसक्छ साहित्यले । आनन्द प्रदान गर्छ र सकारात्मक बन्न प्रेरित गर्छ । संवेदनशील भाव विकास गराउँन भूमिका निर्वाह गर्छ । कोमल भावको माग गर्छ । यसले नै परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्छ होला ।
त्यस्तै, साहित्यले आवाज उराल्न प्रेरित गर्छ । मुठ्ठी कस्न र अधिकार प्राप्तिका लागि उठ्न आँट दिन्छ । मुक्ति र समानताका लागि अक्षरहरु जाग्छन् । अनि मानिसमा वागी चेतना अङ्कुराउँछ । यसले प्रगतिका लागि उठाउँछ । क्रान्ति यसरी पनि हुन्छ होला । जसरी समाज र व्यवस्था परिवर्तनमा साहित्यले अग्रणी भूमिका खेलेको इतिहास साक्षी छ ।
८. साहित्यमा दिगो विकासका लागि राज्यस्तरबाट कस्तो कदम चालिदिए राहत महसुस गर्न सकिएला?
मेरो काम नेपाली साहित्यमा मन लगाउनु हो । म सरकारबाट केही कदम चालिए राहत महसुस हुन्छ भन्ने ठान्दिनँ । एक त विश्वास पनि लाग्दैन कि त्यस्तो कुनै कर्म हुन सकोस् । हामी स्वयम् निरन्तर लागिरहने हो । मैले बुझेको यत्ति हो । अब केही भन्नैपर्छ भने, चालिएका कदम इमानदार हुनु जरुरी छ ।
निस्पक्ष हुनु अपरिहार्य छ । साहित्यिक प्रतिष्ठानहरुबाट धेरै काम हुनसक्छन् जसले नेपाली साहित्यलाई सर्लक्कै माथि उठाउन बल प्रदान गर्छ । बालबालिकालाई नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा आकर्षण गर्नुगराउनु आवश्यक हुन्छ त्यसका लागि राज्य र निजीस्तरबाट धेरै सकारात्मक प्रयास हुनुपर्दछ । बालबालिकाले पढ्न छाडे ।
नेपाली साहित्यको पाठक घटे । नेपाली साहित्यका किताबको विक्री कम भयो । मानिसहरुले भन्दैगरेका यी र यस्ता वाक्यहरु गलत साबित गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।
९. आजभोलि नेपाली साहित्यमा आगन्तुक शब्दहरू बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ यस्तो प्रवृतिले के कस्तो असर पर्न सक्छ?
शब्द नै हो शक्ति साहित्यको । शब्दले चित्र कोर्नुपर्छ । सजिलो कहाँ छ र । त्यसक्रममा कहिले आगन्तुक शब्दको सहयोग लिनुपर्छ त कहिले शब्दलाई बोलाएरै ल्याउनु पनि पर्छ । यसरी ल्याइएका शब्दलाई नेपालीपन दिन सक्यौं भने हाम्रो आफ्नै भाषामा सहयोग पुग्ने हो ।
नेपाली भाषाकै शब्दभण्डार बढ्ने हो । तर जथाभावी प्रयोगको पक्षमा म छैन । लेखनलाई दुरुह र कुरुप बनाउने किसिमको प्रयोगले साहित्यलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
१०. साहित्यको प्रायःजसो सबै विधा विवादित बनेको छ यस्तो अवस्थामा साहित्य क्षेत्रमा रुचि भएकाहरुलाई र साहित्य क्षेत्रमा रुचि हुन चाहनेहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ?
साहित्यका विधाहरु नै विवादित छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । संवाद हुुनसक्छ, विवाद हैन । लेखनमा रुचि राख्ने र लेखनमा आउन चाहनेलाई मैले सुझाव दिनु नै पर्दैन खासमा चाहिँ । जोसँग रुचि छ, लगाव छ, निरन्तरताको सम्भावना छ भने बाँकी काम आफसेआफ हुन्छ । रहर मात्र हो भने तपशीलका कुरा । तर पनि के भन्छु भने, आफ्ना सिर्जना तत्काल प्रकाशन भइहाल्नुपर्छ भन्ने नसोच्नूस् । प्रकाशन भएमा प्रशंसा हैन सुझावको अपेक्षा गर्नूस् । आफ्नो विधा र रुचि अनुसारका धेरैभन्दा धेरै किताब पढ्नूस् । लेख्दा आफ्नै कुरा लेख्नूस् । निजी अनुभूति लेख्दा कतै मिल्ने वा प्रभावित देखिने सम्भावना कम हुन्छ । आफ्नो लेखनलाई धेरैपटक सम्पादन गर्नूस् वा विश्वासयोग्य सम्पादकको सहयोग लिनूस् । घुम्नूस् र जीवन बुझ्नूस् । अनि, लेखिरहनूस् लेखिरहनूस् लेखिरहनूस् ।
११. कविता सङ्ग्रह “सन्नाटाको लय“भित्र केके भेटिन्छ? पाठकहरुले के का लागि पढ्नुपर्छ ?
’सन्नाटाको लय‘भित्र २८ थान कविता छन् । कविता नै भेटिने हुन् । अरु के भेटिएला ? भेटिएला आफ्नै अनुभूति । कतै पाठकले आफैंलाई भेट्नुहोला । पाठकहरुको आआफ्नै उद्देश्य र कारण हुनसक्छन् कविता पढ्नुमा । यही कारण मेरा कविता पढ्नूस् भनेर चाहिँ म भन्दिनँ । म यत्ति भन्छु, कविताका पारखीलाई निरास बनाउने छैनन् कविताहरुले । मेरो कविता लेखन र पछिल्लो समयको कविताको स्वर पढ्न रुचाउनेहरुका लागि ’सन्नाटाको लय‘ एउटा सुन्दर कविता कृति हो भन्ने प्रतिक्रयाका आधारमा म यसो भनिरहेको छु । आदरणीय कविताप्रेमी पाठकले किताब पढ्नुभयो भने, २८ कवितामा केके पाउनुभयो वा केके पाउनुभएन भन्ने कुरा लेखेर मेरो कुनै पनि ठेगानामा पठाइदिनुभएमा म आभारी हुनेछु ।
१२ अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केहि बाँकी छ कि?
सोध्न छुटाउनुभएका प्रश्न सोध्नुभएमा म आफ्ना कुरा भन्नेछु । धन्यवाद !
मगलवार, कार्तिक २६, २०७६, ०७:११:००
असार २१, २०७७ मनु बिद्राेही